Par Par Lay Passes Away | MoeMaKa Burmese News & Media
မြို့နေကလေးများက စစ်ဘေးသင့်ကလေးများအတွက် ကူညီအားပေးမှုပြုလုပ်
ဒီမိုကရေစီ လူရွှင်တော် (ဦး) ပါပါလေး ကွယ်လွန်
မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ သြဂုတ် ၃၊ ၂၀၁၃
RFA Burmese သတင်းကောက်နုတ်ချက် …
နှုတ်ခမ်းမွှေးညီနောင်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ မန္တလေးမြို့က လူရွှင်တော် ဦးပါပါလေးဟာ ဒီနေ့နေ့လည် ၁ နာရီက ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။ ဦးပါပါလေးဟာ ဆီးနဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့ကစလို့ ဆေးရုံတက်ခဲ့ရပြီး ဒီနေ့ကွယ်လွန်သွားတာလို့ ညီဖြစ်သူ ဦးလူမော်က ပြောပါတယ်။ ဦးပါပါလေးရဲ့ ဈာပနကို သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဦးပါပါလေးဟာ စစ်အစိုးရ လက်ထက်မှာ နိုင်ငံရေးအမှုနဲ့ ထောင် ၃ ကြိမ်ကျခံခဲ့ရပြီး သေဆုံးချိန်ထိ ပွဲကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့ လူရွှင်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံခြားသားတွေကြားမှာလည်း ကျော်ကြားခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်နဲ့ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွေမှာ လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်ကနေ ခေတ်စနစ်ကို သရော်တဲ့ တောက်တိုမယ်ရ မန္တလေးမြို့က ဟာသပျက်လုံးများ ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကို နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ပုံမှန်တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက်မှာတော့ ဦးပါပါလေးဟာ ပွဲကျင်းပဖို့ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက် မရရှိပေမယ့် မန္တလေးမြို့နဲ့ အနီးတဝိုက်ဒေသတွေမှာ ပရိသတ်ရှေ့ ပြန်လည်ဖျော်ဖြေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဦးပါပါလေးကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် ၆၇ နှစ်ရှိပြီး၊ ဇနီးသည် ဒေါ်ဝင်းမာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်က ပုံတူပန်းချီ၊ ပန်းပု၊ ဓာတ်ပုံပညာရှင် Jim McNalis က သူ့အီးမေးကနေ အခုလိုပြောထားပါတယ် …
I was very surprised and saddened by the news that Par Par Lay had passed on. I send my sincere condolences to Daw Win Mar and the entire family. What an enormous loss. He will be sorely missed by all his friends around the world. (Your American Brother)